महान श्री*मान बिनोद खड्का र अनिताको कथामा रुबिना | भन्छिन यस्तो श्री*मान सबैको हुदैन (भिडियो हेर्नुहोस्) | Public 24Khabar
Home News महान श्री*मान बिनोद खड्का र अनिताको कथामा रुबिना | भन्छिन यस्तो श्री*मान...
महान श्री*मान बिनोद खड्का र अनिताको कथामा रुबिना | भन्छिन यस्तो श्री*मान सबैको हुदैन (भिडियो हेर्नुहोस्)
सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट झन्डै ३ घण्टा पर खुर्कोटनजिकैबाट बगेको छ, सुनकोसी नदी । बेतोडले बगेको कोसीको छाल काट्दै माझीले डुंगा तारेको हेरेर हुर्किएँ । डुंगा चढ्ने आँट कहिल्यै आएन । १४ वर्षअघि पोखरा आएपछि पहिलोपल्ट यति ठूलो फेवाताल देखेँ । अहिले ६४ वर्षको उमेरसम्म यही तालमा डुंगा खियाइरहेछु ।
म ५ वर्षकै छँदा बुबा बित्नुभयो । दुई भाइ पैसा कमाउन भारततिर गएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा पैसा कमाउने कहीँ केही उपाय थिएन । दुईटै भाइ नेपाल फर्किन पाएनन् । उतै बिते । तिनीहरूलाई आफ्नो आँखाले देखिएन । के भएर बिते भन्ने पनि पत्तो भएन । दिदी १८ वर्षअघि बित्नुभयो । म आमा पालेर बसेकी थिएँ । उहाँ पनि बितिहाल्नुभयो । आमा बित्नुभएको १५ वर्ष भयो ।
बिहे गर्न सकिन्थ्यो होला तर आमालाई रुवाएर गर्न मन लागेन । छोरा भने पनि छोरी भने पनि मै थिएँ । अरू सबै सकिए । म बिहे गरेर एउटासँग जाउँला, ममाथि लोग्नेकै खटन होला मलाई खान–लाउन दुःख नहोला, तर मेरी आमालाई कसले हेर्ने ! खासमा आमालाई दुःख हुन्छ भनेर बिहे गरिनँ । मेरी आमा मेरै हातमा बित्नुभो । आमाको काजकिरिया सबै आफैं गरेँ । छोराले बोक्ने जुठो बोकेर फालेँ । एक वर्षसम्म बारेर बसेँ । आमा बितेपछि एक्लै भएँ ।
गाउँमा आमा हुँदा खेतीपाती थियो । बस्तुभाउ पालिन्थ्यो । अहिले खेती गर्न पनि छोडियो । जंगलमा गएर घाँस, दाउरा काट्नुपर्ने ! लडेर मरे पनि खोजी गर्ने मान्छे कोही नहुने ! दिनदिन बुढ्यौली लाग्दै गएपछि गाउँमा खेतीपाती गरेर खान सकिएनँ ।
दिदीकै ज्वाइँ सुन्दर विक ४० वर्षअघि पोखरा आएर डुंगा चलाउन थाल्नुभएको थियो । उहाँले दिदीका ४ छोरी, ३ छोरालाई यतै बोलाउनुभयो । ज्वाइँले डुंगा चलाएरै लेकसाइडमा घर–घडेरी जोड्नुभएको छ । दिदीका छोरीहरूले ‘खाए सँगै खाउँला, भोकै परे भोकै बसौंला’ भनेर यतै बोलाए । मलाई पनि गाउँ छोड्न मन थिएन । गाई, भैंसी, बाख्रा पालेर बसेकी थिएँ । नसक्ने भएरै यता आएँ । अझै पनि गाउँमा गए जग्गा छ । घर भूकम्पले लडाइहाल्यो । म एउटालाई गाउँमा घर बनाएर बस्न सक्दिनँ भनेर छोडे । जग्गा सबै बाँझो छ ।
पोखरा आएपछि सुरुको एक वर्ष छोरीहरूकै घरमा भान्से भएँ । ज्वाइँहरू डुंगा चलाउँथे, छोरीहरू तालकिनारमा सानोतिनो व्यापार गर्थे ! उनीहरूलाई खाना पकाएर ल्याइदिने काम मेरो थियो । तालमा आउँदाआउँदै डुंगा सिकेँ । डुंगा सिकेपछि चलाउन जानियो । त्यसपछि फेवातालमा डुंगै चलाइयो ।
Previous articleआलिफ र कल्पना इन्द्रेणीमा अहिलेसम्म्कै क’डा दोहोरी; दोहोरिपछि प्रेमको चर्चा चल्दा ल, जाए आलिफ (हेर्नुहोस भिडियो)
Next articleसरकारमा पुग्ने बित्तिकै विप्लवले गरे यति ठुलो घोषणा || बिदेशका सबै युवालाई नेपाल फर्काउने (जानकारीका लागि सेयर गराै)